नेपालको विकास किन हुन सकेन ? यसको ठोस कारण के हुन सक्छ भन्ने कुरा पेचिलो हुदैछ । नेपाली हामीमा कमजोर मनोबृति र अर्काको भरमा बाच्ने संस्कारका कारण पछि पर्दैछौं । यसको ठोस कारण हो सहयोग लिने बानी । जबसम्म हामीमा सहयोग लिने बानीको विकास रहनेछ तबसम्म देश उकालो होइन ओरालो लाग्दै जानेछ । यदि हामी […]
आज पृथ्वी जयन्ती दिवस : यस्तो थियो पृथ्वीनारायण शाहको योगदान
हरेक बर्ष पौष २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ । यस दिन केवल एउटा राजाको जन्मदिन मात्र नभई सिंगो नेपालको पहिचान अनि नेपालीपनाको बिगुल फुकिएको र झक्झक्याउने दिनका रुपमा पनि लिँदै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाईन्छ । आज पनि पुस २७ गते देशभर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु गरेर मनाउँदैछन् । पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईहरूले गोर्खामा जन्मिएका […]
पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस पर्छ मनाउनै
हामी यतिसम्म गिर्दैछौं र स्वार्थमा डुब्दैछौं कि राष्ट्र निर्मातालाई समेत भुल्दैछौं । हाम्रो यही बानीको कारणले गर्दा आज हामीपछि पर्दैछौं । भोली २७ गते पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ सफल पारौं । हरेक बर्ष पौष २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ । यस दिन केवल एउटा राजाको जन्मदिन मात्र नभई सिंगो […]
हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो नै हो र हामीले अव अलमल नगरी हाम्रो लुटिएको भूमि फिर्ता गर्ने बेला भएको छ र यसका लागि हामीलाई बलियो आधार लुटेर लानेले नै दिएका छन त्यो पनि आफ्नो नक्सा बिना कारण हाम्रो भूमि राखी परिवर्तन गरेर र नक्साको स्वरुप परिवर्तन मात्र नगरी ठुलो पनि बनाएर जुन कार्यका लागि […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । केहि हप्ता अगाडिदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न तम्सिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैछु भन्दै मन्त्रीहरुलाई कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नजान आग्रह समेत गरेका थिए । तर मंगलबार भने पुनर्गठन गर्न सकेनन् । बुधबार पनि नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाएर टुंगो लगाउन लागेका ओलीले सकेनन् । अन्ततः त्यहि दिन […]
जनआन्दोलन ६२/६३ ले नेपालीको कायापलट हुने सपना देखेका हामी नेपाली माछो-माछो भ्यागुतो भएका छौं । आज हामीले देशको हितमा र नेपाली नागरिकको हकहितमा केहि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । मैले सोचेको थिए दुई तिहाईले बन्द उद्योग खोल्न र नयाँ-नयाँ उद्योगमा पैसा लगाएर बेरोजगारको अन्त गर्दै युवा पलायन हुनबाट रोक्नेछ तर भएन अब यस्तो अवसर […]
पृष्ठभूमि महागुरु फाल्गुनन्द किराँत धर्मका महान गुरु तथा समाज सुधारक थिए । फाल्गुननन्दलाई किराँत भाषामा “मुहिगुम आङसिमाङ” भनिन्छ । फाल्गुनन्द आफ्नो जीवनको अन्तिम पलसम्म किराँत धर्म संस्कार संस्कृतिको उत्थान संरक्षणका निमित्त लागिरहे । फाल्गुनन्दको जन्म पूर्व नेपालको इलाम जिल्लामा भएको थियो । आठ वर्षकै उमेरमा हत्या हिंसा गर्न नहुने, झुट्ठो बोल्न नहुने, नारीजाती सृष्टिकर्ता हुनाले […]
बलभद्र कुंवर नेपालका एक राष्ट्रिय विभूति तथा एक वीर योद्धा थिए । बलभद्र कुँवर १५ माघ १८४५ अर्थात ३० जनवरी १७८९ मा पिता सरदार चन्द्रवीर कुँवर र आमा अम्बिका देवीको कोखबाट जन्मिएका थिए। बलभद्रका बुबा सरदार चन्द्रवीर कुँवर पनि प्रख्यात योद्धा थिए । यिनकी आमा अम्बिकादेवी बूढाकाजी अमरसिंह थापाकी छोरी पनि प्रखर वीर योद्धा थिइन् […]
नेपाललाई किन बीर गोर्खालीको देश भनिन्छ ? यस्तो छ कारण जानी राखौ ! हिटलरले भनेका थिए “यदि म संग गोर्खाली थिए भने, कुनै पनि देशका सैनिकले मलाई हराउन सक्दैन थिए ।” बिन लादेनले भनेका थिए “यदि मसंग गोर्खाली सेना भएको भए अमेरिकालाई काचै खाइदिन्थे ।” एक पाकिस्तानी सैनिक जनरलले भनेका थिए “यदि मेरो पक्षमा गोर्खाली […]
छठ पर्व नेपालको विशेषगरी मिथिलाको प्रमुख पर्व हो । मिथिलांचलमा यस सूर्यपूजालाई पराशक्ति प्रकृति पूजाको रुपमा, लोकविधि विधान अनुसार परम्परागत रुपले पूजा गर्ने परम्परा छ । यसै तिथिमितिमा छठिमाईको पूजा सूर्यपूजासँगै गरिन्छ । साम्ब पुराणमा आफ्नै पिता श्रीकृष्ण तथा महर्षी दुर्वासाको सरापद्वारा कुष्ठरोगबाट पीडित साम्व सूर्यको आरधनाको फलस्वरूप रोगमुक्त हुन गएको भन्ने चर्चा छ । […]
नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको रमझम चलिरहेको छ । विभिन्न खालका बत्तीहरु बालेर घर, आँगन, गाउँ, सहर नै झिलिमिली भएका छन् । विशेषगरी आज भाईटिका हो । आज सबैका चेलीहरुले आफ्नो माइतीलाई रितिरिवाज अनुसार दाजुभाईलाई पुजेर भाईटिका लगाई दिने र फूल लगाई दिनेछन्छ । सबैको गलामा सैपत्री फुल र निधारमा टिकाले सजिनेछ । यसरी चेलीहरुले […]
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ् नेपालको राजकीय भ्रमणमा शनिबार नेपाल आएका थिए । नेपालको भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अनौपचारिक भेटघाट गरेर मात्र शनिबार नेपाल आएका थिए । यसमा विभिन्न सम्झौंताहरुमा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाल र चीनको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि पनि यो भेटघाट तथा भ्रमण आवश्यक छ । कुनै राष्ट्र प्रमुख कुनै […]
बडादशैं नेपालीहरुको महान चाड हो । दशै नेपालको वार्षिक क्यालेन्डरमा सबभन्दा लामो र सबैभन्दा धेरै शुभ पर्व हो, जुन देशभरिका सबै जाति र हिन्दु धर्मका नेपालीहरूले मनाउँछन् । राष्ट्रिय चाड दशैं हिन्दु धर्मवलम्बीहरूले आश्विन महिनाको शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नवमीसम्म (नवरात्रभर) शक्तिको आराधना गरी दशौं दिन विहान दशमीका दिन आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरुको हातबाट टीका-प्रसाद ग्रहण गरेर […]
पृष्ठभूमि मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो । यो समाजमा विभिन्न जातजाती र विचारका मानिसहरु रहेका छन् । यसो भनिरहँदा यस प्रकृतिको काखमा स्थिर यो मानवको जीवन आजको वर्तमान परिवेशमा अत्यन्त कठिन समस्याहरुसंग जम्काभेट गरिरहनु पर्ने हुन्छ । आजका मानिसहरुको जीवन अत्यन्त व्यस्त रहेको हुन्छ । यस कारणले मानिसको जीवनमा रहेका जीवनी शक्ति कमजोर हुँदै जाने […]
माया भनेको यस्तो शब्द हो । न यसलाई हेर्न सकिन्छ नत देख्न सकिन्छ न जोख्ननै सकिन्छ । मात्र महसुस गर्न सकिन्छ । कतिपय मानिसहरु माया देखि टाढा रहन खोज्छन् भने कतिपय मायाले नै संसार चलिरहेको छ भन्ने धारणाले गर्दा माया गर्न थाल्दछ र माया गरिरहेका हुन्छन् । माया धेरै खालका हुन्छन् । एउटा आफ्नो परिवारलाई […]
भूईंहटहर रसिलो हुन्छ । यो संतोष प्रदायक हुन्छ । यो स्वादिलो पनि हुन्छ । पाकेको, सुनौलो, रसिलो अनि स्वादिलो यो फललाई दाँतहरुले चपाइरहुँ जस्तो लाग्छ किनकि यसमा विशेष प्रकारको आकर्षण हुन्छ जसले कसैको पनि मन लोभ्याउन सक्छ । भूईंकटहरमा आबद्ध स्वादिलो गुण र मीठोपनाका कारण यो फललाई अनौठो देनको रुपमा लिइन्छ । यो अचम्मको फल […]
महिलाले हमेशा लुकाउने ६ कुरा
भनिन्छ, ‘महिलाहरुको मनको बात थाहा पाउन निकै मुस्किल हुन्छ ।’ त्यसैले महिलाहरु आफुले गरेको गल्ति भुलेर पनि सुनाउदैन् । आफ्नो जीवन साथीसँग पनि सुनाउदैनन् र कति पय कुराहरु यस्ता हुन्छन्, जुन चाहेर पनि कसैलाई भन्न सकिन्न । केही यस्ता कुरा हुन्छन्, जुन उनीहरु हमेसा लुकाएर राख्छन् । यसमा कसैको अहित हुने कुरा नहुनसक्छ, तर पनि […]
रुख कटहर नेपालमा तराईदेखि पहाडसम्म हुने विभिन्न नामले चिनिन्छ, कटहर, रुखकटहर, काँडेफल आदि । संसारका फलहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो फल कटहरको हो । यो फल विशेष गरी तरकारीमा प्रयोग हुने भएकोले धेरै उपयोगी मानिन्छ । यस्को गुदी कोया सुगर र भिटामीनहरूको मूख्य श्रोत हो । यसको बीउमा प्रोटीन, कार्वोहाइड्रेट र खनिज तत्वहरू पाइन्छ । यस्को […]
तनाव हटाउँने खानेकुरा
केरा केरामा पोटासियम र कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । केरा खानाले शरीरमा सेरोटोनिन नाम गरेको न्युरोट्रान्समिटर बढी उत्सर्जन हुन्छ, जसले तनाव कम गरी मानिसलाई शान्त राख्न मद्दत गर्छ । तनाव छ भने दिनमा दुइटा केरा खाने गर्नुस् । स्याउ स्याउमा फोस्फोरस र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छन् । तनाव उत्पन्न […]
काठमाडौँमा ५११ जनासहित उपत्यकामा आज ६४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४२९ पुग्यो
हनुमानको महिमा र यस्तो छ मन्त्रको प्रयोग
कुलमान घिसिङले व्यवस्थापकीय कौशल नदेखाएका भए लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन : गगन थापा
करेन्ट लागेर वडाध्यक्ष तथा नेकपाका नेताको मृत्यु
शिक्षण अस्पताल जान लागेका डा. केसीलाई विमानस्थलबाटै प्रहरीले जबरजस्ती पुर्‍यायो ट्रमा सेन्टर
आज देशभर ८९४९ जना होम आइसोलेसनमा